बोलिवियाई झण्डा र यसको इतिहास
बोलिभिया - देश को विरोधाभास: मा bowels को पृथ्वी झूट भारी reservoirs को खनिज संसाधन, तर देश रहलपहल एक को poorest मा विश्व। यो बावजुद, बोलिभिया पहिलो नजर मा आकर्षक छ। यो देश स्थित मा दक्षिणी गोलार्ध, यो छ बहुराष्ट्रीय। यसलाई आधिकारिक 37 भाषाहरु हुन मानिन्छ। साथै , देश क्रांतियों को एक विशाल संख्या लागि ज्ञात छ। त्यसैले, 1825 मा त्यहाँ दुई भन्दा बढी सय coups थिए।
यो तपाईं, पाठ्यक्रम, को युनी नुन मरुभूमि को सौन्दर्य देखें र अमेजन जंगल भ्रमण गर्न, Cordillera हेर्न, Incas पुरातन शहर वरिपरि टहलने गर्न सक्छन् जहाँ एक राष्ट्र हो।
बोलिभिया को झण्डा: फोटो
बोलिभिया को आधिकारिक प्रतीक, 1851 मा स्वीकृत भएको थियो। बोलिभिया झण्डा 22:15 (चौडाई गर्न लम्बाइ को अनुपात) को अनुपात संग एक आयताकार आकृति छ। रंग प्यालेट लागि जाँदा, बोलिभिया को झन्डा एक परम्परागत तीन रंगीए छ। क्यानभासमा रातो, पहेंलो र गाढा हरियो2बराबर क्षेत्र विभाजन गरिएको छ। रातो - रगत आफ्नो मान्छे को स्वतन्त्रता, पहेंलो लागि संघर्ष बगाएको - को Incas को रंग र खनिज को एक विशाल जलाशय को स्मृति, हरियो - एक उज्जवल भविष्यको लागि आशा र विकास लागि प्रयास।
बोलिभिया झण्डा को इतिहास
बोलिवियाई झण्डा धेरै पटक परिवर्तन भएको थियो। यसरी, 1825-1826 GG मा। क्यानभासमा मा एक पाँच-चुच्चा तारा सुन रंग प्रदर्शन तेर्सो रातो पट्टी थियो। क्रस शाखा को पुष्पांजलि मा फिट मधुर स्वर star। माथिल्लो र तल्लो जाले गाढा हरियो रंग को स्ट्रिप्स थिए।
1826 मा यो विकास र जहाँ कपडा3भागमा विभाजित भएको थियो झन्डा, को नयाँ संस्करण अपनाए थियो। रातो र शीर्ष - - पहेंलो तल्लो समूहले हरियो, केन्द्र थियो। तर, अक्टोबर 31, 1851 राज्य को आधिकारिक प्रतीक को अन्तिम संस्करण अपनाए थियो। राज्य झण्डा, को नागरिक संग coincides कि कोट को नागरिक झण्डा मा प्रतिनिधित्व छैन बाहेक। देश को सैन्य झण्डा मा क्रस शाखा को हरियो पुष्पांजलि देखाउँछ।
बोलिभिया कोट को शस्त्र
बोलिभिया सुन्दर राष्ट्रिय झण्डा मा चित्रण गरिएको छ जो, हतियार को कोट दावा। यो तेर्सो पहेंलो धर्काहरू को केन्द्र मा स्थित छ। हतियार बोलिभिया कोट - यो देखाइएको छ जो को बोलिवियाई Potosi पहाड केन्द्र मा गोलो छ। पर्वतमा अन्तर्गत त्यहाँ देश को Fauna को मुख्य प्रतिनिधि छवि छ - alpacas। हतियार को कोट उज्ज्वल नीलो रंग को एक फ्रेम मा संलग्न छ।
बोलिभिया - कृषि देश, त्यसैले हतियार चित्रण गरिएको को कोट जुनून फल र गहुँ एक sheaf। बन्चरो, एक Phrygian टोपी, muskets, Cannons र छ क्रस झण्डा हो स्थित मा पृष्ठभूमि को प्रतीक। Condor - को Andes को मुख्य चरा, त्यसैले त्यहाँ उहाँले प्रतीक मा चित्रण गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई केही आश्चर्यजनक छ।
जहाँ एक शिकार एकल संघीय नमूना लाइसेन्स प्राप्त गर्न र उहाँले दिनुहुन्छ भनेर? प्राप्त र वैधता शिकार अनुमति वर्दी संघीय नमूना लागि प्रक्रिया
निर्वाण - यो नयाँ महिलाको आनन्द छ?
परिवहन को माध्यम - एक ... वर्गीकरण र वाहन को प्रकार
रूस मा ओभरसाइजगरिएको कार्गो को यातायातका नियम
रूसी क्षेत्रीय कार्यक्रम र आफ्नो कार्यान्वयन
नुस्खा चिनियाँ खाना: पोर्क मीठो र अमिलो सस र एक भाग्य कुकी
ओवन मा स्याउ Bake: सरल, स्वादिष्ट, उपयोगी
कुकुरलाई आवाज कमान्ड र अन्य आदेश कसरी सिकाउने
परम्परागत इटालियन केक: नुस्खा